TALOOYIN: MA BUUXIYO? HA DHIGO! 21 SHIRKADAHA XIDHIIDHKA - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » VIDEOS TALOOYIN: MA BUUXIYO? HA DHIGO! 21 CAYAAR AH
TALOOYIN: MA BUUXIYO? HA DHIGO! 21 CAYAAR AH
WAXYAABAHA LAGA HELI KARO SHARCIYADA CAAFIMAAD
Timo-warshadaha iyo timaha ayaa waxyeello u geysta timaheena, waana inaad ka taxadartaa si aad uga fogaato kala-go'idda. Haddii kale, waa inaad timahaaga gaabisaa. Waqtiga xajinta timuhu maaha hawl maalmeed. Fiidiyowkani waxaad ka heli doontaa faahfaahin badan oo ku saabsan daryeelka timaha oo isbedelaya noloshaada!
Haddii aad aragto timo lumis, waa inaad isla markiiba xallisaa dhibaatadan. Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo maaskaro liddi ku ah maadooyinka dabiiciga ah. Isku dar maylka kaneecada, biyaha kulul, malab, saliid, vodka iyo jaalle. Daadi isku dar ah timaha. Maaskarkani wuxuu kicin doonaa kobcinta waxaadna jecleysan doontaa natiijada. Cuntada kale ee koriinka timaha iyo sida loo quudiyo waa inay saliid muhiim ah ku noqoto guriga. Daawadeena ku saabsan samaynta saliidaha lagama maarmaanka ah ee guriga kula leh castor, avokado iyo saliidda qumbaha.
Aan ka dhigi karno dareeraha kuleylka ee dabiiciga ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa kalluunka oo ka kooban fitamiino, macdano iyo ilaha omega-3 kaas oo ka caawiya in ay timirto timahaaga dabiiciga ah. Qaado digsi oo ku shub Koobabka 2 ee biyaha, ku dar 2 c. kalluun iyo karkariyo. U diyaari in muddo ah. Riix jewiga adigoo nadiif ah. Codso jelitaanka ka hor intaadan qalajin timahaaga. Fikradda kale ee wanaagsan waa in la sameeyo shaambo qallalan oo guriga ah isla markaana kaydisa lacag badan. Waxaad u baahan doontaa nuurgeeys, budada kookaha iyo baking soda. Isticmaal buraashka qurxinta si aad u isticmaasho shaambadaas. Timaha subaxda ma aha wax dhibaato ah.
Sida gunno ahaan, waxaad baran doontaa sida timahaaga u lakulmey iyada oo aan qallajin lahayn, qurxiyo timo qurux badan iyo daaweyn waxtar leh oo ka dhan ah dabka.
00: 09 Maaskaro fiican oo timo lumis ah
02: 18 Jeexjeexa jajaban ee jilicsan
03: 45 Cuntada shamboo qalalan
07: 10 ponytail oo qumman
09: 11 saliidaha lagama maarmaanka u ah koritaanka timaha
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=ZVSEpvFe9Uo
10 MAGAALADA HOOSE EE CIIDAMADA DALKA Lama Faché - VIDEO
POUPY ET MURIEL raalli ka ah taageerayaasha - HALKAN VIDEO